बाबाले ढाँट्नुभयो - China Radio International
(GMT+08:00) 2014-08-19 09:27:04
मलाई बाबाले सानैदेखि सत्य बोल्न सिकाउनु भएको हो। मैले कुनै उपद्रो गरेँ अथवा जानी नजानीकन कुनै काम बिगारेँ भने बाबाले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो 'तिमीले यसो गरेकी हौ?' सजायबाट जोगिनका लागि मैले आफूले गरेकी हैन भन्दै कहिले भाइको टाउकोमा त कहिले ममीको टाउकोमा लगाउने प्रयास गर्थ्येँ। तर, बाबाले थाहा पाइहाल्नुहुन्थ्यो गल्ती कसले गरेको छ भनेर। म एउटा गल्तीलाई ढाक्नका लागि उहाँलाई झुट बोलेर अर्को गल्ती गरिरहेकी हुन्थ्येँ। मेरो गल्ती भएमा बाबाले मलाई पिट्ने अथवा कान समाएर उठबस गर्न लगाउनु हुन्थ्यो। अनि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो 'साँचो बोलेको भए सजाय पाउने थिएनौँ। यो सजाय तिमीले गरेको उपद्रो तथा गल्तीका लागि होइन यो तिमीले झुटो बोलेकामा पाएकी हौ।' मलाई त्यतिबेला पश्चाताप हुन्थ्या झुटो बोलेकामा। त्यसपछि बिस्तारै ममा पनि सत्य बोल्ने बानी बस्न थाल्यो। मैले खेल्दा भाइलाई धकेलेर लडाएँ अथवा भान्सामा पानी पोखेँ भने म बाबालाई तुरुन्तै भनिहाल्थेँ 'मैले गरेकी हुँ । झुक्किएर यस्तो भएको अब दोहोर्‍याउँदिन।' त्यसो भन्दा बाबाले मलाई सजाय हैन चकलेट दिनुहुन्थ्यो सत्य बोलेकामा।
म बाबालाई धेरै माया गर्छु। मैले जानेदेखि म बाबासँग सुत्दै आएकी छु। कहिलेकाही भाइले बाबासँग सुत्ने भन्यो भने म भाइसँग झगडा गरेर रोइदिन्थेँ। त्यसपछि बाबाले भाइलाई ममीसँग सुत्न मनाउनुहुन्थ्यो र म खुशीसाथ बाबासँग सुत्थ्येँ। बाबाले मलाई मोटरसाइकलमा राखेर कतै घुमाउन लैजाँदा सँधै अगाडि राखेर लानुहुन्थ्यो। अगाडि बस्ने कुरामा पनि भाइ र मेरो झगडा नै हुन्थ्यो। तर भाइलाई बाबाले तिमी सानो छौँ, पछि दिदीजत्रै भएपछि अगाडि बस्नु अहिले पछाडि ममीको काखमा बस भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो। भाइ मजत्रै बन्ने कल्पना गर्दै पछाडि बस्थ्यो। तर, भाइ कहिल्यै मजत्रो भएन किनभने भाइ बढ्दा म अझै ठूलो भइसकेकी हुन्थ्येँ र फेरि उही भनाइ दोहोरिन्थ्यो 'दिदी जत्रो भएपछि'।
मेरो बाबाले मलाई सानो छँदा धेरै कथाहरु सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँ साँझमा कामबाट एकदमै थाकेर आएको समयमा पनि म कथा भन्न कर गर्थ्येँ। उहाँले बागको कथा, स्यालको कथा, चिलको कथा, गाईको कथा भन्नुहुन्थ्यो। जब उहाँ पहिले भनेकै कथा दोहोर्‍याउनुहुन्थ्यो तब 'यो कथा त पहिले नै भन्नु भएको हो, नयाँ कथा भन्नू' भनेर म कचकच गर्दथ्येँ अनि कहिलेकाँही सबै कथाका टुक्राहरु जोडजाड पारेर नयाँ कथा बनाएर सुनाउहुन्थ्यो। मलाई रमाइलै लाग्थ्यो। पछि कथा सुन्ने श्रोतामा भाइ पनि थपिन थाल्यो।
बाबाले मेरै नाम जोडेर कथा भन्नुहुन्थ्यो। म ठूली भएर विदेशमा पढ्न गएको, त्यहाँबाट बाबालाई फोन गरेको, बाबाको न्यास्रो लागेको, बाबा साथमा नभएर जन्मदिन पनि मनाउन नपाएको भन्दै उहाँ निकै भावुक भएर कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँले मैले फोन गरेको नक्कल गर्दै रुन्चे स्वर पारेर कथा भन्दा म ठूलो आवाज निकालेर रुन थाल्थेँ। अनि बाबाको काखमा घोप्टो परेर 'म कहिल्यै पनि विदेश जाँदिन, सँधै बाबासँगै बस्छु' भन्थ्येँ । त्यसपछि यस्तो कथा भन्नु पर्दैन भनेर बाबालाई अर्को कथा भन्न लगाउँथेँ। ममी बाबा र मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो 'तिमीहरुको के नाटक हो !' त्यसपछि बाबा फेरि नयाँ कथा भन्न सुरु गर्नुहुन्थ्यो। बाबा कहिलेकाँही मलाई रुवाउनकै लागि पनि त्यस्तै कथा भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ आफू विदेश गएर दुःख पाएको र मेरो जन्मदिनमा आउन नपाएको भन्दै कथा भन्दा म फेरि रोइदिन्थे र भन्थेँ 'बाबा हजुर पनि मलाई छोडेर विदेश जानु पर्दैन।'
बाबाले अरु कथा भन्दा पनि म रुने गर्थ्येँ। बाबाले बाघले गाई खाएको, बजार घुम्न गएका बेला सानो नानी हराएको, चराको बच्चा गुँडबाट भुइँमा झरेर उड्न नसकी बिलौना गरेको भन्दा म रुँदै कथा सुन्थेँ। बाबा र मसँगै चलचित्र हेर्दा सँगसँगै आँशु पुच्छ्थ्यौँ। सबैले भन्थे बाबाको र मेरो स्वभाव धेरैजसो मिल्छ। यसरी टिप्पणी गर्दा म अत्यन्त खुशी हुन्थेँ। म मनमनै गद्गद् हुँदै कल्पना गर्दथ्येँ 'बाबाजस्तै हुन पाए हुन्थ्यो।'
बेलुकी म बाबालाई अँगालेर सुत्थेँ। बिहान उठ्ता बाबा कलेज पढाउन गइसक्नु भएको हुन्थ्यो। म उठेर आँखा मिच्दै यताउता बाबालाई खोज्थ्येँ। बिस्तारै मलाई बानी पर्‍यो। बिहान म स्कुल जाने बेलामा बाबा घरमा आउनु भएको हुन्नथ्यो। म स्कुल गइसकेपछि बाबा आएर खाना खाएर फेरि दिउँसोको काममा जानुहुन्थ्यो। बेलुकी म स्कुलबाट आउँदा पनि बाबा घरमा नदेखेपछि म बाबालाई फोन गर्न तम्सन्थेँ। पूर्व प्राथमिक तहमा अध्ययन गरुन्जेल मलाई बाबाको मोबाइल नम्बर कण्ठ थिएन। म ममीसँग झगडा गरी गरी बाबालाई फोन गर्न जोरजुलुम गर्दथ्येँ। फोन लागेपछि बाबालाई छिटै घर आउन आग्रह गर्थ्येँ। तर, बाबा कहिले पनि समयमा आउनु भएन। उहाँको काम नै त्यस्तै थियो। उहाँ बेलुका एफ.एम. रेडियोमा बोल्न जानु हुन्थ्यो। अनि कहिले मिटिङ र कहिले पार्टी भनेर अबेला आउनुहुन्थ्यो। म बाबा नआइकन खाना खाँदिन भनेर अड्डी लिन्थेँ तर निन्द्रा लाग्ने समयसम्म पनि बाबा नआएपछि ममीले मलाई फकाएर खाना खुवाउनुहुन्थ्यो र सुताउनु हुन्थ्यो। म ओछ्यानमा बाबाको ठाउँ राखेर सुत्थ्येँ। बाबा अबेला आउँदा मलाई कहिल्यै ढाँट्नु भएन। उहाँ सँधै मलाई आज मेरो मिटिङ अथवा कार्यक्रम छ, म पार्टीमा छु छोरी तिमी खाना खाएर सुत भन्नुहुन्थ्यो। बाबासँग मजाले खेल्नका लागि मैले सँधै शनिबार पर्खनु पर्दथ्यो।
मैले ड्रइङ बुक, कलर पेन्सिल, कटर, इरेजर, चकलेट वा खेलौना किनिदिनु भनेर माग गर्दा बाबालाई कहिल्यै ढाँट्नु भएन। उहाँले पैसा छैन भनेको बेला म ल्याउनु हुन्न भनेर चित्त बुझाउँथे। अनि भरे अफिसबाट आउँदा ल्याइदिन्छु भनेको समयमा म निकै उत्साही हुन्थेँ। उहाँले ल्याइदिन्छु भनेको समयमा पक्कै ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास हुन्थ्यो।
कक्षा एकमा पढ्नका लागि मलाई बाबाले निकै टाडाको स्कुलमा भर्ना गरिदिनुभयो। म स्कुलबस चढेर जान थालेँ। भाइ चाहिँ कोठा नजिकैको पहिले म पढेकै स्कुल पढ्न थाल्यो। मैले पढ्ने नयाँ स्कुलमा आइतबार पनि बिदा हुन्थ्यो। त्यसकारण म बाबासँग शनिबार बाहेक आइतबार पनि केही खेल्ने समय पाउन थालेँ। बाबा घरमा मलाई पढ्न, गृहकार्य गर्न र चित्र बनाउन सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यस बाहेक गीत गाउन, नाच्न सिकाउँदै उहाँ मलाई कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि मलाई सबैभन्दा खुशी उहाँले घुमाउन लाँदा हुन्थ्यो।
बाबा आफ्नै कामले गर्दा १०/१२ दिनका लागि चीन घुम्न जानुभयो। मलाई बाबासँग छुटिनभन्दा पनि बाबाले चीनबाट विभिन्न खेलौना र लुगा कपडा ल्याइदिने हुनाले खुशी नै हुन्थेँ। बाबा काठमाडौँ बाहिर जाँदा अथवा कतै विदेश जाँदा पहिले नै मलाई भन्नुहुन्थ्यो। अनि कतै जानु भयो भने कहिल्यै पनि खाली हात र्फकनुहुन्नथ्यो। खानेकुरा, खेलौना र लगाउने कपडा लिएरै आउनुहुन्थ्यो। ममीले सँधै खेलौना किनेर पैसा सकेको भन्दै बाबालाई गाली गर्नुहुन्थ्यो।
एक दिन ममी र बाबा गफ गरिरहनु भएको थियो। ममी भावुक र अँध्यारो अनुहार लगाएर बाबासँग कुरा गर्दैहुनुहुथ्यो। म भाइसँग खेल्दै थिएँ। मैले ममीलाई अँध्यारो अनुहार लगाएको देखेर सोधेँ 'ममी के भयो?' ममीले मलाई भन्नुभयो 'तेरो बाबा विदेश जाने रे छोरी, नजानू भन्न।' मैले पहिले त ममीको कुरा पत्याइँन। अनि बाबालाई सोधेँ। उहाँले हो भनेपछि मलाई पत्याउन करै लाग्यो। मैले बाबाको छातीमा टाउको मडार्दै भने 'बाबा, हजुर विदेश जानु भयो भने म कहिल्यै पनि बोल्दिन। हजुरले मलाई बर्थडेमा दिएको उपहार पनि लिन्न।' त्यो दिन बाबाले भन्नुभएको कुरा अझै पनि मलाई सम्झना छ। बाबाले मेरो कपाल मुसार्दै भन्नुभएको थियो 'छोरी म विदेश जाने पनि तिमीहरुकै लागि त हो नि। म विदेशबाट तिमीहरुलाई के के ल्याइदिन्छु नि।' बाबाले कुरा गर्दागर्दै चीन जाने भनेपछि म ढुक्क भएँ। किनभने पहिले पनि बाबा चीन जानु भएको थियो। मैले चीन जाने भए त भइहाल्छ तर मेरो बर्थडेमा आउनुपर्छ भन्दै भाइसँग खेल्न गएँ।
एक दिन बाबाले बेलुकी सुत्ने बेलामा मलाई भन्नुभयो 'छोरी ममीले भनेको मान्नू। राम्ररी पढ्नू। भाइलाई माया गर्नू। टेलिभिजन धेरै नहेर्नू। म भोलि चीन जाँदैछु।' बाबाले भन्दा म टाउको हल्लाउँदै उहाँको आदेशलाई शिरोधार्य गरिरहेकी थिएँ। उहाँ केही दिनदेखि बिहानै कलेज जानु भएको थिएन र मलाई बस चढाउन र लिन आफैँ गइरहनु भएको थियो। मलाई बाबाले बस चढाउँदा र स्कुलबाट फर्कदा लिन गएको सार्‍है मन पर्दथ्यो। म उहाँको कुरा सुन्दासुन्दै कतिखेर निदाएँ थाहै पाइँन। बिहान उठ्दा बाबा र ममी झोला र सामानहरु मिलाइरहनु भएको थियो। ममीको अनुहार निकै मलिन र अँध्यारो थियो। साउनको महिना बाहिर दरर पानी परिरहेको थियो। भाइ ज्वरो आएर केही दिनदेखि स्कुल नगइकन औषधि खाँदै सुतिरहेको थियो। बाबाले मलाई स्कुल जानका लागि तयार गर्नुभयो। उहाँले मेरो र भाइको थुप्रै फोटोहरु खिच्नुभयो। भात खाएपछि उहाँ नै मलाई बस चढाउन लिएर जानु भयो। जाने बेलामा ममीले भन्नुभयो 'छोरी आज बाबा चीन जानुहुन्छ। बाबालाई अल द बेस्ट र ह्याप्पी जर्नी भन्देऊ'। मैले ममीले भनेजस्तै बाबालाई भनेँ। उहाँले मलाई अँगाल्नुभयो। मैले रेनकोट ओढेकी थिएँ। उहाँले बस चढाउन जाँदा पनि मलाई राम्ररी पढ्न, ज्ञानी बन्न र ममीले अर्‍हाएको मान्न भन्नुभयो। मैले हुन्छ भनेर बाबाको अनुहार हेरेँ। उहाँको आँखाभरि आँशु थियो। मैले बाबालाई भने 'मेरो बर्थडेमा आउने भनेर पहिले प्रोमिस गर्नुहोस्।' उहाँले मैले भने अनुसार नै बर्थडेमा आउने प्रोमिस गर्नुभयो।
म स्कुलबाट आउँदा ममी बस स्टपमा लिन जानुभयो। मैले बाबा आउनु भएन भनेर प्रश्न सोद्धा ममीले बाबा त तिमीलाई स्कुल पठाएर चीन गइहाल्नुभयो नि भनेपछि बल्ल सम्झिएँ। अनि टाउकोमा हातले हान्दै भनेँ 'ए हो त नि मैले त भसक्कै भुलेँछु।' त्यसपछि म ममीको हात समाउँदै भन्न थालेँ 'बाबाले चीनबाट केके ल्याइदिनुहुन्छ। हजुरलाई, मलाई अनि भाइलाई। मेरो बर्थडेमा कति ठूलो गिफ्ट लिएर बाबा आउनुहुन्छ।' ममी केही पनि नबोलिकन हिँडिरहनुभयो।
कोठामा आएपछि म भाइसँग खेल्न थालेँ। भाइलाई ज्वरो केही कम भएको रहेछ। सुत्ने बेलामा मलाई फेरि न्यास्रो लाग्यो। मैले बाबालाई अँगालेर सुत्न नपाएकोमा मलाई रुन पनि मन लाग्यो। ममी धेरै बेरसम्म निदाउनु भएन। मैले ममीलाई सुत्ने बेलामा बाबाले जस्तै कथा भन्न कर गरेँ। तर उहाँले कुनै जवाफ फर्काउनु भएन। मलाई गाली पनि गर्नु भएन र मतिर हर्नु पनि भएन। मैले उहाँको अनुहारमा हेरेको उहाँको त गालाबाट आँशु बगिरहेको रहेछ। म सुतेँ। सपनामा म बाबालाई नै अँगालेर सुतिरहेकी थिएँ।
बाबा गएको केही दिनपछि मसँग टेलिफोनमा कुरा गर्नुभयो। त्यतिबेला हाम्रो कोठामा कम्प्युटर थिएन। त्यही भएर म कहिलेकाँही फोनमा मात्र बाबासँग कुरा गर्न पाउँथेँ। एक दिन ममी, म र भाइ आन्टीको कोठामा गएको बेला बाबालाई कम्प्युटरमा हेर्दै कुरा गर्न पाइयो। मलाई त्यो दिन निकै खुशी लाग्यो। बाबाले मलाई राम्ररी पढ्यौ भने ल्यापटप किनिदिन्छु भन्नुभयो। म अझै खुशी भएँ। भाइले बाबासँग कुरा गरेपछि भन्यो 'ममी कोठामा जाऊँ न बाबा आउनु भएको छ।' उसले कम्प्युटरमा बाबालाई देखेर कोठामा आउनु भएको भन्ठानेछ। मैले भाइलाई बाबा कोठामा होइन चीनमा हुनुहुन्छ भनेर सम्झाएँ।
केही दिन पछि नै ममीले ल्यापटप ल्याउनुभयो र त्यसमा इन्टरनेट जोड्नुभयो। अब हामी दिनहुँजस्तो बाबासँग कुराकानी गर्न थाल्यौँ। बाबाले मलाई भन्नुभयो 'छोरी तिमीले राम्ररी पढेकोमा मैले पठाइ दिएको ल्यापटप, राम्रो छ हैन? सँधै राम्ररी पढ्नु म तिमीलाई अझै केके पठाइदिन्छु।' म खुशीले गदगद् भएँ। भोलिपल्ट मैले साथीहरु र स्कुलको म्यामलाई स्कुलमा भनेँ 'बाबाले मलाई चीनबाट ल्यापटप पठाइदिनु भएको छ। म त्यही ल्यापटपमा बाबालाई हेर्दै कुरा गर्छु। अहा चीनमा त कस्तो हिउँ परेको छ। मेरो बाबा त ठूलो ज्याकेट लगाएर चीनमा बस्नु भएको छ।' मेरो कुरा सुनेर सबै साथीहरु र म्याम पनि हाँस्नुभयो।
जाडो महिनासँगसँगै फागुन पनि नजिकै आउन थाल्यो। बाबा त दशैँभन्दा पहिले नै चीन जानु भएको। उहाँ दशैँमा पनि आउनु भएन। दशैँमा बाबा आउनु भएको भए हामी इलाम जाने थियौँ र त्यसपछि मामाघर दाङ। तर बाबा नआएकाले हामी इलाम नगई काठमाडौबाट दाङ गयौँ। दाङबाट काठमाडौँ फर्कनासाथ हामी कम्प्युटरमा कुरा गर्न थालिहाल्यौँ। म ममीलाई फागुन आउन कति छ भनेर दैनिक सोद्धथ्ये। फागुन तीन गते मेरो जन्मदिन। त्यही भएर म फागुन तीन गतेको प्रतीक्षामा थिएँ। म हरेकपटक बाबालाई मेरो जन्मदिनमा आउनुहोस् है भन्थेँ। उहाँ हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो।
यसपालिको फागुन तीन गते शनिबार परेको रहेछ। म झन् धेरै खुशी भएँ। दिनभर बर्थडे मनाउन पाइने भयो। बाबा पनि आउनुहुन्छ। घरपरिवार, आफन्त र केही मेरा साथीहरु पनि आउँछन्। फागुन २ गते ममीलाई बैंकले फोन गरेर मेरो बर्थडे केक लिन शनिबार दरवार मार्गमा जानू भन्यो। मेरो बर्थडेमा सँधै बैंकले केक दिन्छ। हामी त्यही केक काटेर जन्मदिन मनाउँछौँ।
फागुन तीन गते शनिबार। बिहानै उठेपछि ममीले मलाई र भाइलाई नुहाइदिनुभयो। हामी पशुपतिनाथको मन्दिरमा गयौँ र दर्शन गरेर टिका लगायौँ। कोठामा फर्किएपछि मैले ममीलाई बाबा कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर सोधेँ। भरे तिम्रो केक काट्ने बेलासम्म त बाबा प्लेन चढेर आइहाल्नुहुन्छ नि भन्नुभयो। हाम्रो कोठा गौशाला नजिकै अनि एयरपोर्ट पनि नजिकै छ। म हरेक प्लेनहरु आउँदा ममीलाई सोध्ने गर्दथ्येँ बाबा यही प्लेनमा आउनुहुन्छ?
दिउँसो दुई बजेपछि घरमा मेरो बर्थडे मनाउन पाहुनाहरु आउन थाल्नुभयो। ममीले मलाई राम्रो लुगा लगाइदिनु भएको थियो। म सात वर्षे फुच्ची राम्रो जामामा सजिएर पुतलीजस्तै भएकी थिएँ अनि उस्तै फुरफुर गरेर उडिरहेकी थिएँ। सबैका हातमा मलाई दिन प्याकिङ गरिएका उपहारहरु थिए। मलाई उनीहरुले ल्याएको उपहारमा त्यति ध्यान गएको थिएन। म भन्दै थिएँ मेरो बाबाले ल्याउने उपहार नै सबैभन्दा राम्रो हुनेछ। सबैजना मलाई जिस्क्याइरहेका थिए 'खै कस्तो छ तिम्रो बाबाले ल्याएको उपहार हेरौँ न त हामी पनि।' म उनीहरुलाई हातको भाउ लगाउँदै भन्थेँ 'अहिले मेरो बाबा आउनुहुन्छ अनि देखौला मेरो उहार।' मेरो कुरा सुनेर उनीहरु गलल्ल हाँस्थे।
सबैजना भेला भएर कोठा खचाखच हुँदा पनि मलाई एक्लै भएजस्तो भइरहेको थियो। म बाबाकै बाटो हेरिरहेकी थिएँ। बेलुन, केक र मैनबत्तीले कोठा सजाइएको थियो। ममीले मलाई केक काट्न लगाउँदा मैले बाबा खै? भनेर सोधेँ। ममीले यी बाबाले अहिले ल्याइदिनुभएको तिम्रो गिफ्ट भनेर एउटा प्याकेट दिनुभयो। मैले सोचेँ म ट्वाइलेट गएको बेला बाबा आउनु भएको रहेछ। म भान्सामा गएर बाबालाई खोज्न थालेँ। तर भेटिँन। ममीले मलाई कम्प्युटर खोलेर देखाउँदै ऊ बाबा देखिनस् भन्नुभयो। बाबाले मलाई कम्प्युटरबाटै ह्याप्पी बर्थडे छोरी भन्नुभयो। अनि उपहार खोलेर हेर त मैले के पठाइदिएको रहेछु भन्नुभयो।
मैले रुँदै भने 'बाबा हजुर नआउने? म केक काट्दिन। उपहार पनि लिन्न।' मैले सोचेकी थिएँ, बाबा कही कोठाको नजिकै आएर मलाई जिस्क्याउँदै हुनुहुन्छ। म रोएको देखेर बाबा पनि रुनु भयो र भन्नुभयो 'छोरी म यसपटक आउन पाइँन। अफिसले बिदा दिएन। अर्कोपटक आउँछु। मलाई माफ गर ल। मैले तिमीलाई बर्थडेमा आउँछु भनेर झुटो बोलेको थिएँ।'
म झसङ्ग भएँ। मेरो बाबाले मसँग झुटो बोल्नु भएको रहेछ। मेरो बाबाले मलाई सँधै सत्य बोल्न सिकाउनुभयो। उहाँले मलाई सत्य बोल्दा पुरस्कार दिनुभयो। अनि सत्य बोल्दा मैले गरेका गल्तीको माफी पनि दिनुभयो। आज मेरो बाबाले मेरै बर्थडेमा मलाई झुटो बोल्नुभयो। मेरा लागि सबैभन्दा खुशीको दिनमै बाबाले मलाई ढाँट्नु भएको रहेछ। मैले महिनौँका रातहरु बाबाको न्यानो अँगालोमा सुत्न नपाए पनि बर्थडेको खुशीसँग साटेकी थिएँ। तर म बर्थडेमा एक्लै भएँ। मैले केक काटेँ र सबैलाई खुवाएँ। सबैको उपहार लिएँ। सबैले भनिरहेको ह्याप्पी बर्थडेको आवाज पनि टाडा कतै बोलेजस्तो लाग्दथ्यो। सबै मेरै वरिपरी भए पनि म एक्लै भएजस्तो लाग्दथ्यो। अनि मेरो कानमा बाबाले बोलेको मात्र गुन्जिरह्यो 'छोरी मैले झुटो बोलेको थिएँ।' मेरा लागि बर्थडे झुटो भइदिएको भए हुन्थ्यो। उपहार झुटो भएको भए हुन्थ्यो। फागुन तीन गते झुटो भएको भए हुन्थ्यो। तर मैले विश्वास गर्न करै लाग्यो मेरो बाबाले मलाई ढाँट्नु भएको रहेछ।
साभारः कमाण्डर पोष्ट, 2070 माघ 11 गते (2014 जनवरी 25 शनिबार)